Cranberry juice. Izinzuzo kanye iresiphi
Ukudla kanye iziphuzo, Iziphuzo
Akukho ukudla ingagcinwa isikhathi eside, kodwa akukho amanzi - akukho kuka izinsuku 5. Nokho, ngezinye izikhathi, ngisho noma ngosuku uzidla uziqede isilinganiso esifanele uketshezi, bese zingena enkingeni. Ngokwesibonelo, exfoliate izinzipho izinwele ziyaqothuka ngaphezulu, ebusweni noma izingalo zingavela amawala, njll Lezi zonke izimpawu beriberi. It is ngokuvamile kubonakala entwasahlobo, lapho yonke isitokwe izakhi trace ewusizo futhi, ngokukhethekile, amavithamini, bazinza ebusika. Kodwa imithombo entsha kahle akuzona okwamanje sesivuthiwe. Yiqiniso, ungakwazi ukuthenga iphakethe multivitamins aphuze nabo njengoba izimpawu ezingemnandi kuzodlula ... Kodwa mhlawumbe kangcono ukuthi uphuze okumnandi cranberry juice futhi bayakhohlwa amaphilisi?
Ngakolunye uhlangothi akucaci ukuthi munye kuphela berry ungagcina ku ezihlukahlukene nezindaba?! Kodwa sekuyisikhathi eside lo mbuzo ochwepheshe eyaziwa impendulo. Iqiniso lokuthi lokhu berry kancane ugcwele amavithamini, amaminerali, ukulandelela izakhi kanye nokunye. Kuyasiza nge ezihlukahlukene izifo, futhi amayunithi contraindicated. Kulokhu, sibonga ubuchwepheshe yesimanje yokuthutha kanye nokulondolozwa umkhiqizo ngesikhathi it may manje - maphakathi no-entwasahlobo, ukuthenga cranberry fresh nokunomsoco. Isimo sezulu cool ngokwanele isidingo ke, nakuba izithelo eziningi kanye amajikijolo, okuyinto babe Vitamin C, njengoba kwakunjalo nje efudumele.
Ukuze uqalise ukunciphisa isibalo sabantu abaphuza ijusi akuyona efiselekayo kusuka cranberry. Empeleni, kuba labo babe asidi esiswini anda futhi kukhona ezihlukahlukene ukuvuvukala izifo emathunjini. Abanye bangakwazi ukujabulela lokhu isiphuzo kakhulu ngendlela kunesidingo. Nokho, kuwufanele kokukhuluma ukusabela nomzimba. Izingane ezincane ziyashesha kakhulu enkingeni futhi cranberry juice kungenzeka ngiyimbangela yazo. Nokho umumo wabantwana labo iguliswa cranberry, yincane ngokwanele, ngakho izinkinga ezinjalo awavamile.
Kodwa imiphumela emihle izakhi mkhondo ayingxenye yalesi berry emzimbeni womuntu libanzi inxa zombili phambi! Cranberry juice kuyokusiza nge amavithamini, kodwa futhi izinso izifo, rheumatism nekhanda. It uba nokuvimbela isifo sezinsini noma ukubola kwamazinyo, ngosizo asebenzayo womsebenzi ubuchopho kanye ukwandisa isibalo nama-bacterium awusizo emzimbeni.
Yiqiniso, akusiwona zonke izinzuzo isiphuzo, kodwa futhi indlela yokwenza cranberry juice? Umbuzo ilula, kodwa lokhu kudinga ezinye amakhono kanye nesineke. Nokho, ngemva wake zama lokhu isiphuzo emangalisayo, wena phinde it kaningi. Lokhu kudla kwakwehla esiphundu!
Omama abaningi abasemakhaya uyazibuza, 'kanjani cranberry juice? "Ngenxa yokuthi berry ugcwele zensimbi okonakalayo. Umthetho wokuqala ukulungiswa isiphuzo - izitsha kufanele esakhiwe ngezinto ukuthi ngeke oxidize. Ngokwesibonelo, koqweqwe lwawo, ipulangwe, ipulasitiki, njll
Ngakho, indlela yokwenza cranberry juice?
Amajikijolo ngempela geza siyixazulule. Cindezela ukuphuma ijusi. Ukuze wenze lokhu, ochotshoziwe amajikijolo, uthele amanzi abilayo futhi elicwengekileyo. Okusele, ungakwazi uthele amanzi abilayo futhi yayeka. Ngokuvamile, okokuqala ezinye amajikijolo bunjalo. Kwanele uthele amanzi abilayo izikhathi 3 kanye uhlobo ukuze konke ewusizo ishiywa oketshezini. Zonke 3 juice sikhathele kakhulu futhi amanzi ehlangana, ukunambitha ushukela kanye cranberry juice ulungile! Kungcono idliwe chilled.
Indlela yokwenza cranberry juice uma simisiwe? Yonke inqubo kuyafana lowo odlule, kuphela ekuqaleni incibilikiswa amajikijolo ngempela.
Uma ufuna ukwengeza "ukunambitheka" ukuze juice sakho, bese-ke kungenziwa abeke esikhundleni uju noshukela. It has an kakhulu sine umphumela cranberry juice nge Mint. Ukuze silungiselele lokhu isiphuzo wenze decoction of Mint, futhi kuwo wengeze cranberry juice. Khumbula, le kancane ke kuyobilisa noma ashisise abe usizo ngokwengeziwe uzoqhubeka.
ngezabelo oluyisibonelo kulabo cranberry classical juice 1 inkomishi amajikijolo, 1-3 amalitha amanzi noma umhluzi, 2/1 inkomishi ushukela noma 3-6 wezipuni of uju. Yiqiniso, konke kuncike okuthandwa umndeni wakho kanye indlela kulungiselelwa lesi siphuzo.
Sifisela wena impilo enhle nge imithi esihlwabusayo!
Chernogolovskaya amanzi - umthombo wokuphila amandla
Kuyini cocktail umusi?
Phuza "Jaguar": ukwakheka kanye nemiphumela ukusetshenziswa
Kanjani futhi baphuza iwayini
Ubani owabhala "Oblomov"? Umlando kule noveli "Oblomov"
Isaladi sesanqante ne-pepper ebusika. Iresiphi yesaladi yamakhukhamba, utamatisi, pepper, izaqathe kanye anyanisi ebusika
"Angrikaps": umthengi ukubuyekezwa kanye odokotela. Yokusetshenziswa zomuthi
Kungani ukudangala ezingabantu kunzima kakhulu ukuqaphela
Kungenzeka yini sokukhipha umdlezane? Sifunda!
School in "Avatar," lapho is futhi yini edingekayo?
Yini wenze yogurt - ngowokuqala izitsha, ehla neziphuzo
UHlelo Imvelo "Pascal ABC"
Wish uhlu: ukudala uhlu izifiso kanye nezipho